Ogaden News Agency (ONA) – Dr. Ducaale oo wareysi qiimi badan siiyay Idaacadda Codka dadweynaha Somaliyeed (ICDS)
Dr. Ducaale oo wareysi qiimi badan siiyay Idaacadda Codka dadweynaha Somaliyeed (ICDS)
Posted by ONA Admin	/ April 18, 2011
Maalintii Sabtida ahayd ayaa ICDS waxaa laga sii daayay wareysi dheer oo meela badan taabanaya oo Dr. Ducale oo ah aqoonyahan wadani ah ay ka qaadeen. Wareysigaa ayuu Dr. Ducaale uga xogwaramay arima badan oo quseeya guud ahaan umadda Somaliyeed gaar ahaan halganka gobanimadoon ee ka socda dalka Ogadenya.
Su’aala badan ayaa laga weydiiyay Dr. Ducaale halganka uu shacabka Somaliyeed ee dagan Ogadenya ugu jiro aaya-ka-yashigiisa wuxuuna ku tilmaamay Dr Ducaale inuu yahay halganka ka socda Ogadenya mid ku abtirsada halgan muddo dheer soo taxnaa oy waajib ku tahay inuu taageero qofkasta oo Somali ah oo leh dareen wadaninmo. Wuxuu Dr. Ducaale sheegay inuu yahay halganka ka socda Ogadenya mid xaq ah, maadaama shacabkaasi uu ku doonayo xoriyadii uu Ilaahay siiyay qofkasta oo banii aadam ah.
Mar la weydiiyay jabhadda ONLF oo hadda halgankaa taariikhiga ah hogaaminaysa inay ku socota jidkii shacabka Somaliyeed ee dagan halkaa gaarsiin lahaa xoriyadooda wuxuu sheegay inay taariikhda xustay inay gaadhayaan umadii u dhaqaaqda halgan gobanimadoon hadaanay iyagu ka daalin, wuxuuna hoosta ka xariiqay inay JWXO ku socoto wadadii lagu yaqiinay halgan gobanimadoon oo xaq ah. Wuxuu ku dheeraaday Dr. Ducaale in dhalinayarada loo yaqaano buu yidhi Raamoole-yaasha ee duurka ku jira ee u badheedhay oonka iyo gaajada ee naftooda u huray inay soo dhiciyaan sharaftii umadda Somaliyeed ay waajib ku tahay qofkasta oo damiir leh inuu taageero. Mar wax laga weydiiyay kuwa taageeraya gumaysiga ee loo yaqaanoDaba-qoodhiga ayuu sheegay inay umad kasta oo gobanimadoon ahayd ay lahaayeen qaar la socda gumaysiga oo u adeegaya, mana ah arintaasi buu yidhi mid wax u tartay gumaysiga. Wuxuu yidhi kuwaasi waa qaar shaydaan uu duufsaday oo iimaan laawayaal ah.
Maamulada ka dhisan Somaliya ayuu ku tilmaamay Dr. Ducaale in aanay ahayn qaar xor u ah inay diidaan waxa ay Itobiya ka dalabto, isagoo raaciyay in hadday diidaan amarka la siiyo ay iyaga qudhooda xabsiga u taxaabayaan. Sidaa darteed waa in loo arkaa buu yidhi dad aan xor ahayn oo Itobiya ay u taliso, mana raacsana buu yidhi shacabka Somaliyeed waxyaabaha ay u fulinayaan gumaysiga Itobiya.
Wuxuu kaloo ka hadlay Dr. Ducaale shirqoolada ay Itobiya u maleegto umadda Somaliyeed iyagoo iska horkeena marwalba oo dhex dhiga shiqaaqo. Wuxuu uga baaqay in laga feejignaado maleesiyada cabdi Ilay ee kolba ku soo duulaya dadka shacabka ah ee xuduudaha dagan oo aan loo aanaynin qabiil oon la odhanin buu yidhi waxay ahaayeen reer hebel. Maleesiyada Cabdi ilay waa ciidan Itobiya u qoran oo loogu talagalay xasuuqa shacabka Somaliyeed ayuu yidhi Dr. Ducaale.
Mar wax laga weydiiyay arimaha Somaliya wuxuu Dr. Ducaale sheegay inay tahay arin lala yaabo inay siyaasiyiinta Somaliya ka dalbadaan Itobiya iyo Kenya inay qaranimadoodii la dhisaan taasoo uu ku tilmaamay inay tahay aqoon darro. Waxaa kaloo uu sheegay in kuwii burburiyay qaranimadii Somaliyeed ee dagaal oogayaasha ahaa ay weli ku jiraan siyaasadda loona soo adeegsado burburinta kolba wixii lagu heshiiyo.
Wareysigan oo aad u dheer arima badanna uu kaga hadlay Dr. Ducaale waxaad ka dhagaysataa ICDS adigoo gujinaya maalinta –Sabti–
waa waraysi la yaab leh, xaqiiqada jirta ayuu ka hadlay Dr.Ducaale guud ahaan arrimaha soomaalida gaar ahaan kuwa soomaalida rer Ogaadeenya.
kii damiir lahaw ku wax qaado, waa kaas aqoonyahanka wata caqliga caafimaadsan.
sida uu sheegay Dr.Ducaale shacabka soomaalida Ogaadeenya way gaadhayaan gobanimadooda insha allaah, shacabka kale ee walaalaha soomaliyana allaah ha u soo gurmado.
Dr. cimri dherer iyo caafimaad allaah ha kugu mannaysto. … amiiiiiiiiiiiiiin, Ogaadeenya xorriyad allaah ha siiyo. ….. amiiiiiiiiiin, amiiiiiiiiiiin yaa rabb.
soomaaliya dantooda allaah ha ku soo dabaalo. … amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, yaa rabb.
mahamoud djibouti says:
aniga oo magacaygalayiraahdo mahamoud djibouti waxaan u mahadcelinayaa Dr Ducaale dadkakalana waxaan leeyahay kudayda Dr ducaale walaalayaal ilaahay xaqa ha inagaran siiyowaxaakaloon shacab kadulman urajaynayaa guul iyo gobanimo aamiim aamiin aamiin
dr, ducaale iyo inta caafimaadka qabtaaba waxaa ina gu waajib ah in aan sookasbano wana wax lagu faani karo in aan uruursano aqoon yahahnka culimada fanaaniinta abwaanada iyo wixii lamid ah maanta waxaan haysanaa shacab ciidan dhul intaba
ninwalba waxaaku filan shirkeen ah in aan oogu yeedhno oo uu kahadlaa ama war baahinteena aan kawaraysano matalan dr , ducaale waa nin aqoon yahayn ah caafimadnaqaba halwarysi oo uubixiyay ayaa waxaa uu sookasban hayaaa tobnaan somali ah oo aan sidaas u adkayn ama aan sidaas maskax ulaahyn waxa aniga ilaquman dr , ducaale in warbahinteena marwalba nalookeeno lagana qoro xigmadaha iyo halkudhagyada uuhayo
waxaan aad oogu farxay shir ay kawada qaybgaleen isaga iyo xildhibaan riyaale xaamud onkadwaday cajalad waxaan idhi dadka caawa dhagaysan ahaya labadn aqqon yahay ayaa iga nasib badan wana wax lagu farxo
gyuushii way dhalataye geediga horay uwada
dr. ducaale ilaahay carabkiisa cadaabkii hakahayo
who is this man so called Dr. Du’alle?